Otu esi etinye balenaEtcher na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Otu esi etinye balenaEtcher na Debian 11 Bullseye
November 24, 2021 by Jọshụa James
Bubata ebe nchekwa balenaEtcher
Wụnye BalenaEtcher na Debian
Mepụta USB oyiyi nwụnye na BalenaEtcher
Otu esi edobe balenaEtcher emelitere
Olee otú Wepụ (Uninstall) BalenaEtcher
balenaEtcher bụ ngwá ọrụ na-egbukepụ egbukepụ n'efu na nke mepere emepe nke a ma ama maka ide faịlụ oyiyi dị ka faịlụ .iso na .img na nchekwa zipped na mgbasa ozi nchekwa iji mepụta kaadị SD dị ndụ na draịvụ USB. balenaEtcher nwere nkwado cross-platform na Linux, BSD, macOS, na Windows ma balena mepụtara ma nweta ikike n'okpuru Apache License 2.0.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye baelnaEtcher na Debian 11 Bullseye na otu esi emepụta diski nkesa Linux.
Maka nrụnye ka emechaa, ngwugwu ndị a ga-adị mkpa ka etinyere ya.
Rịba ama, ọ bụrụ na ejighị n'aka, mee naanị iwu ahụ.
Ọrụ mbụ bụ ibubata ebe nchekwa Etcher gọọmentị. Maka ndị ọrụ Debian, nke a dị mfe dịka enwere script bash nke ndị otu Balena mepụtara nke enwere ike ibudata ma megharịa mbubata.
N'ọnụ ọnụ gị, jiri iwu a ka ibudata script bash.
Ọ bụrụ na iwu ndị dị n'elu daa, ọ ga-abụ karịa ngwugwu curl adịghị arụnyere. Iji dozie nke a, jiri iwu njedebe na-esonụ.
Mgbe ahụ megharịa usoro iji budata script bash.
Iwu ahụ ga-etinye iwu bash na-akpaghị aka ka itinye edemede ahụ wee bubata ebe nchekwa ahụ, ma ọ bụrụ na ị tufuru ngwugwu apt-transport-https, gbalịa itinye ya.
Ozugbo emechara, ị ga-ahụ ntuziaka na njedebe nke mmepụta njedebe gị.
Na-esote, gbaa ọsọ Mmelite APT iji hụ na onye njikwa ngwungwu emelitere na nsonye ebe nchekwa ọhụrụ.
Ugbu a ị nwere ebubata ebe nchekwa ahụ, oge eruola ịwụnye ngwa Etcher. N'ọnụ ọnụ gị, jiri iwu a.
Na-esote, nyochaa nrụnye site na iji iwu amụma apt-cache.
Site na BalenaEtcher arụnyere ugbu a, nkuzi a ga-egosi ngwa ngwa ka esi emepụta onyonyo USB nke etinyere bootable. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị a na-ejikarị eme ihe maka ngwanrọ a, dị ka ọtụtụ ndị ọrụ Linux ga-ama banyere distro hopping na mkpa nke oyiyi nwụnye.
Nkuzi a ga-emepụta onyonyo nwụnye ọzọ Fedora.
Nke mbụ, budata onyonyo nwụnye .iso. Maka nkuzi nkuzi, nke a ga-esi na Fedora Workstation download page.
Ọzọ, laghachi na sistemụ Debian 11 gị, mepee balenaEtcher, nke enwere ike ịhụ na ya mmemme > ngosi ngwa > BalenaEtcher.
Ihuenyo mbụ ị ga-abịa mara mma nke ukwuu. Otu n'ime ihe mere a software na-ewu ewu bụ otú dịtụ mfe ọ bụ iji tụnyere ọzọ nhọrọ.
Na ihuenyo ngwa gị, pịa bọtịnụ "Flash si faịlụ."
Ozugbo ịhọrọ foto nwụnye ịchọrọ, pịa bọtịnụ "Họrọ ebumnuche."
Na mpio nke na-esote, họrọ USB nke ịchọrọ iji dị ka ebumnuche maka ngwa Etcher iji gbaa onyonyo a ọkụ.
Ugbu a ka imechaa wee malite ịmepụta diski ihe nrụnye USB bootable, pịa ya "Flash" bọtịnụ.
Ozugbo emechara ma gaa nke ọma, ị ga-ahụ mmepụta yiri ya.
Ekele, ị tinyela balenaEtcher wee jiri ngwanro ahụ mepụta diski mbụ gị USB bootable diski.
Usoro nrụnye jiri njikwa ngwugwu APT tinye ngwanro sitere na ebe nchekwa.
Ka imelite BalenaEtcher, jiri dabara emelite nye iwu ka ị ga-eji ngwungwu APT ọ bụla ma ọ bụ nlele mmelite sistemụ.
Dị ka o kwesịrị, ị kwesịrị ịdị na-eme nke a ọtụtụ oge ka emelite sistemụ gị. Ọ bụrụ na edepụtara mmelite dị, jiri ya dabara-kwalite iwu ka aga n'ihu.
Iji wepu balenaEtcher bụ usoro dị nfe.
Nke mbụ, n'ọnụ ọnụ gị, jiri iwu na-esonụ.
ụdị Y, wee pịa Tinye igodo ịga n'ihu na mwepụ.
Nke a ga-ewepụ nke ọma ngwa na ndabere ọ bụla.
Na-esote, ọ bụrụ na ịchọghị ebe nchekwa na sistemụ Debian gị, jiri iwu a.
Ugbu a mechaa site na iji iwu ikpeazụ iji nwetaghachi ebe nchekwa gị.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye software BalenaEtcher na-ewu ewu na Debian 11 Bullseye.
N'ozuzu, e wezụga mfe nke iji nke na-ewu ewu nke ukwuu n'etiti nkezi ọrụ, ma ọ bụ ka mma, ndị ọrụ na-akwaga na Windows ma ọ bụ MacOS maka oge mbụ iji mepụta Linux USB bootable disk disk, balenaEtcher nwere ụfọdụ nnukwu atụmatụ dị ka ihe na-egbuke egbuke, na-emeghe. -isi iyi na nnọọ fechaa.
Ndị ọrụ toro eto ga-ahọrọ iji Rufus nke gbatịpụrụ nhọrọ dị elu, mana balenaEtcher karịrị ndị ọzọ maka mkpa nkezi.
Categories Debian Tags BalenaEtcher, Nnenna 11 Bullseye Mail igodo
Otu esi etinye / Kwado RPM Fusion na Rocky Linux 8
In Nkume linux
In Mint Linux